“Waxaan u sheegay inuu sii joogo” - Tababaraha Real Madrid Zinedine Zidane ayaa ka niyad jabay amaahdii uu Martin Odegaard ugu biiray Arsenal
Home Horyaalka Ingiriiska “Waxaan u sheegay inuu sii joogo” – Tababaraha Real Madrid Zinedine Zidane...
“Waxaan u sheegay inuu sii joogo” – Tababaraha Real Madrid Zinedine Zidane ayaa ka niyad jabay amaahdii uu Martin Odegaard ugu biiray Arsenal
Tababaraha Real Madrid Zinedine Zidane ayaa shaaca ka qaaday inuu doonayay Martin Odegaard inuu sii joogo Santiago Bernabeu isla markaana uu u dagaallamo booskiisa, halkii uu amaah ugu biiri lahaa Arsenal inta ka dhiman xilli ciyaareedkaan.
Odegaard ayay Real Madrid ka soo qaadatay kooxda reer Norway ee Stromsdogset isaga oo da, yar ahaa 2015. Waxa uu amaah ugu tagay kooxda reer Holland ee Heerenveen sanadkii 2017, ka hor inta uuna labada xilli ciyaareed ee soo socda amaah ugu bixin kooxaha Vitesse iyo Real Sociedad. Odegaard ayaa qeyb ka ahaa kooxda Los Blancos qeybtii hore ee xilli ciyaareedkaan ka hor inta aysan Arsenal heshiis amaah ah kula soo saxiixan intii lagu jiray suuqii January. Zidane-na wuu ka xumaaday inuu arko bixitaanka xidiga Norwey.
Tababaraha Real Madrid ayaa shaaca ka qaaday inuu wadahadalo kooban la yeeshay Odegaard, halkaasoo ninka reer France uu ka codsaday xidiga reer Norway inuu sii joogo kooxda isla markaana uu u dagaallamo booskiisa. Si kastaba ha noqotee, Odegaard ayaa doortay inuu u dhaqaaqo Arsenal bedelkeeda.
“Odegaard? Wuxuu rabay inuu baxo, waxaan ka wada hadalnay laba, saddex jeer arrintaas. Wuxuu doonayay inuu ciyaaro waxaanan ku idhi sii joog oo u dagaallama booskiisa. Waxaan doonayay inuu ka soo laabto amaahdiisa [Real Sociedad xilli ciyaareedkii hore] waxaana u sheegay inuu sii joogo sababtoo ah xilli ciyaareedku weli aad buu u dheer yahay wuuna heli lahaa fursadihiisa. Laakiin wuxuu doonayay inuu baxo oo uu ciyaaro. Runtii waxaan ka doonayay kooxdeyda ”
Xiddiga reer Noorweey ayaa wacdarro dhigay intii uu la joogay Real, taasoo sare u qaadday rajadiisa inuu ka mid noqon doono kooxda koowaad ee Real Madrid marka uu soo laabto. Si kastaba ha noqotee, Odegaard ayaa kaliya todobo kulan u saftay tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan, oo ay ku jiraan shan kulan oo League ah.
Previous articleLiverpool oo ka fiirsaneysa inay xagaagan u dhaqaaqdo xiddig Leeds ka tirsan
Next articleReal Madrid oo guul ka gaartay SD Huesca Xili labo gool uu dhaliyay Raphael Varane